Radio Dhangadhi 90.5 MHz | स्थानीय तहमा झै यसपटक पनि जनताको विश्वास प्रकट हुन्छ : दीर्घ सोडारी
Thursday, November 21 2019, 05:12 | बिहिबार ०५, मङि्सर २०७६ ०५:१२
सोमबार, २० कार्तिक २०७४| Hari Joshi
आगामी मंसिर २१ गते हुने चुनावका लागि बामगठबन्धनले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ को १ मा एमाले कैलालीका अध्यक्ष दीर्घ सोडारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सोडारी स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई कैलालीमा पहिलो पटक पहिलो दल वनाउन सफल नेता हुनुहुन्छ । उहाँको कुशलताले कैलालीमा १३ मध्ये ७ तह एमालले जित्यो भने इतिहासमै पहिलो पटक जिल्ला समन्वय समिति पनि एमालेले गठन गर्न सफल भयो ।
प्रदेश सभाका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ (१ ) गौरिगंगा नगरपालिका पुरै, गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्वर ८ र ९, चुरे गाउँपालिका वडा नम्वर २ र ४, मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नम्वर ५ क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनु भएका सोडारी १२ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको हो । अनेरास्ववियूबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा थालेका सोडारी अखिलको प्राररम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्नु भयो । एमालेमा पनि उहाँ तल्लो तहबाट कमिटीमा संगठित हुँदै जिल्ला सदस्य, सचिवालय सदस्य, सचिव हँदै अध्यक्ष वन्नु भएको छ । ०४६ सालदेखिका हरेक आन्दोलनमा सक्रियता देखाएका सोडारीले १४ पटक गिरफ्तारीमा परेर पटकपटक जेल जीवन पनि भोग्नु भएको छ । राष्ट्रियताको आन्दोलनमा पनि आफूलाई कालापानीमार्च, लक्ष्मणपुरमार्च लगायतका मोर्चामा आफूलाई उभ्याउनु भएका सोडारीले फाया नेपाल, एसविविएम र मानवअधिकार मञ्च जस्ता संस्थामा लागेर पनि सामाजिक अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । प्रस्तुत छ ४० बर्षिय युवा नेता एमाले अध्यक्ष तथा कैलाली ४ को १ बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार सोडारीसंग आसन्न निर्वाचनका सवालमा गरिएको कुराकानी ।
– तपाई प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्ने चर्चा थियो तर अहिले प्रदेशसभामा मनोनयन गर्नु भयो त किन यस्तो स्थिति आयो ?
शुरुमा एमाले एक्लै चुनावमा जाने भन्ने थियो त्यसैले मैले प्रतिनीधिसभामा दावी गरेको थियो । पछि परिस्थिती फरक भयो एमाले र माओबादी सहितका दलको बामगठबन्धन बन्यो । माओबादी केन्द्रका उपल्लो तहका नेता कमरेड लेखराज भट्टलाई ४ नम्वरमा उठाउने सहमति भएपछि म ४ को “१” नम्वर प्रदेशको उम्मेदवार बनेको छु । पार्टीले जे गरेको छ मलाई मान्य छ । हामी लेखराज कमरेड प्रदेश “२” का कृष्ण सुवेदी कमरेड चुनावमा एकसाथ जनताकाबीचमा गइरहेका छौ ।
–जनताको माझमा गइरहेको कुरा गर्नुभयो जनताको प्रतिक्रिया कस्तो छ त ?
जनता वामगठबन्धन भएकोमा निक्कै खुसी छन । हामी जहाँ गयौ जनताले निक्कै राम्रो माया, सदभाव दिएका छन । प्रारम्भिक चरणको हाम्रो जनता भेटघाट कार्यक्रमले हामी खुसी छौ, निक्कै उत्साहित भएका छौ । हामी ४ नम्वरका तीनै क्षेत्रमा चुनाव जित्नेमा शतप्रतिशत ढुक्क छौ ।
–तपाईहरु हुन चुनाव जित्ने खास आधार के के हुन ?
बामगठबन्धनले गर्दा केन्द्रमा प्रदेशमा स्थायी सरकार बन्छ भनेर जनता उत्साहित हुनु । गत स्थानीय तहमा ४ नम्वर क्षेत्रका रहेका सबै तह एमालेले जित्नु । मोहन्यालबाट हाम्रो क्षेत्रमा आएको ५ नम्वर वडा पनि माओवादीले जितेको छ । अर्को कुरा अधिकांश ठाउँमा हिजो एमाले र माओबादीको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । हामी प्रतिस्पर्धी नै एक ठाउँमा आउदा हाम्रो जीत झन सहज भएको छ ।
–जनतालाई के के आश्वासन दिदैहुनुहुन्छ ?
एमाले सरकारमा जाँदा कति जनमुखी काम गर्न सक्छ भनेर हामीले ०५१ सालमै प्रमाणित गरिसकेका छौ । त्यसपछि अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपालको सरकारका पालामा पनि धेरै जनमुखी काम भएका छन । त्यस्तै काम गर्न केन्द्र र प्रदेशमा एमाले वा वामगठवन्धनको सरकार हुन जरुरी छ । देशको, प्रदेशको समृद्धी, विकासका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ त्यसैले हामीले बामगठवन्धन बनाएका छौ । सात नम्वर प्रद्रेशको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, धार्मिक र वन क्षेत्रलाई मुख्य आधार हुन हामी त्यही अनुसार योजना बनाएर अघि बढ्छौ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ को १ मा मुख्य समस्याकारुपमा रहेका अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गरेर मुक्त कमैया, सुकुम्वासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने, विपन्नलाई रासन कार्ड वितरण गरेर प्रत्येक वडामा सुपथ साझा सहकारी पसल स्थापना गर्ने, अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नगर गुरुयोजना निर्माण गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषक पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने, दश किसान एक ट्यूवेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने, कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने, कृषकलाई अनुदान दिने, मल विउविजन सुपथ मूल्यमा दिन विउविजन केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र स्थापना गरेर कृषकका उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गर्ने सोच भनेको छौ । खेल क्षेत्रको विकास गर्ने युवालाई स्वदैशमै रोजगारी उपलव्ध गराउने प्रयास गर्नेछौ । विकास निर्माण कार्यमा महिला सहभागिता अनिवार्यरूपमा ५० प्रतिशत पुगाउन पहल गर्ने छु भनेको छु ।
–तपाई घरदैलोमा पुगेका ठाउँका जनताका माग के छन ?
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ को १ नम्वर क्षेत्रमा पर्ने बुलबुल, मोहन्याल मन्दिर,गर्भा दरवार जस्ता ताल तलैया, मठ मन्दिर पुराना दरवारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर जनताले भनेका छन । थारू संस्कृतिका होमस्टे सञ्चालन गर्ने जोनापुरमा थारु संस्कृतिको संग्राहलय बनाउने योजना मेरो छ । विस्तारै सवै जातजातिका संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्छ । यी कामले आन्तरिक र वाह्य पर्यटक बढनेछन् जसले रोजगारीका साथै नगरको आम्दानी बढ्नेछ । खुटिया, लिक्मा, कटैनी, गौरीगंगा, अण्डैया, शिवगंगा, चौमालाको कटान रोक्ने योजना बनाइनेछ । खुटिया,मटकौना, गौरीगंगा र शिवगंगामा व्यवस्थित शवगृह निर्माण गर्नेछौं । सुन्दर ठाउँमा वनभोज स्थलहरू बनाउने छौं । आफू निर्वाचित भएपछि आफूले गर्ने र गरेका काम वारे नियमित सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना पनि मेरो छ ।
–एउटा प्रदेश सांसदले यति धेरै काम गर्न सक्छ र कि मुख्यमन्त्री वा मन्त्री हुन्छु भन्नु भएको छ ?
सात नम्वर प्रदेशमा हाम्रो वहुमत आउने निश्चित छ । सम्भवत मुख्यमन्त्री पनि एमालेले नै पाउने छ । पार्टीले व्यक्ती जसलाई बनाए पनि एमालेकै मुख्यमन्त्री हुन्छ । एमाले कैलालीको अध्यक्ष भएकोले प्रदेश सरकारमा म समेटिने पनि पक्कापक्की नै हो त्यसैले अझै धेरै काम गर्न सजिलो हुनेछ । स्थानीय तहमा हामीले जितेका छौ काम गरेर देखाउनका लागि प्रदेश र केन्द्रमा हामीले जितेपछि मात्र स्थानीय तहको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सक्छ त्यसैले फेरि पनि बामगठन्धनलाई जिताउन आग्रह गर्दछु । बामहरु जिते मात्र विकासका काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने वुझाइ जनताको पनि छ । । हामी सवै कम्यूनिष्टहरु हौसिएका छौ यो एकताले गाउँ,नगर, प्रदेश र मुलुककै विकास गरेर देखाउने अवसर दिनेछ । अव स्थानीय सरकारलाई वलियो वनाउन, काम गर्ने वातावरण दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष परिवर्तन गर्ने हामीलाई जनताले जिताउने विश्वास मेरो छ ।
–अन्यतमा कैलाली ४ नम्वर क्षेत्रका जनतालाई केही भन्नु छ कि ?
हामीले चुनाव जित्यौ भने सात नम्वर प्रदेशको राजधानी कैलालीको ४ नम्वरमै पर्ने मुख्य शहर अत्तरियामा वनाउन जोडदाररुपमा पहल गर्ने छु । कैलालीमा स्थानीय तहमा एमालेलाई पहिलो वनाउने सवै जनसमूदायसंग म आभारी छु । त्यस्तै मेरो क्षेत्रमा गौरीगंगा, गोदावरी, चुरे र मोहन्याल एमालेलाई जिताउने जनताप्रति उच्च सम्मान गर्दछु । एमाले र माओवादीप्रतिको त्यो विश्वास यसपटक पनि प्रकट गरिदिन जनसमूदायमा आग्रह गर्दछु । स्थानीय तहमा एमाले र माओबादी भएर चुनावमा होमियौ, अव एक शक्ती भएर अघि वढ्न एमाले र माओवादीका नेता, कार्यकर्ता र आमजनतालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
सोमबार २०, कार्तिक २०७४ ०४:५२ मा प्रकाशित ।